शशांक कोइराला अस्पतालबाट डिस्चार्ज – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ आश्विन ३, शनिबार ०८:४८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएपछि चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा उपचारत महामन्त्री कोइरालालाई अस्पतालले आज डिस्चार्ज गरेको हो ।
गत मंगलबार राति एक्कासी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका कोइरालालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि कोइरालाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो स्वास्थ अवस्थाबारे नियमित चासो चिन्ता र शुभेच्छा तथा स्वास्थ्लाभको कामना गर्नुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, नेता तथा कार्यकर्ताहरु, पत्रकार मित्रहरु, तथा उपचारमा संलग्न डा.विश्वनाथ कोइरालाको चिकित्सक टिमलाई हृदयदेखी नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । मेरो स्वास्थ स्थितिमा क्रमिक सुधार आएसँगै आजै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको छु । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम अब केही दिन होम आइसोलेशसनमै रहने छु ।’
Spread the loveकाठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी केसी जुम्लामा अनसनमा बसेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रवक्ता शर्माले डा. केसीका जायज […]
२०७७ माघ ६, मंगलवार ०९:१७
२०७७ पुष १५, बुधबार ०४:०७
संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढ्योः प्रचण्ड